Tag: kuyedza peji | Martech Zone
Tag: kuyedza peji
Kuedza kweGoogle muGoogle Analytics… Meh
NeChishanu, Nyamavhuvhu 3, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Google Webhusaiti Optimizer kaput, inotsiviwa neGoogle Ongororo. Uine Zvemukati Zvekuedzwa, iwe unogona kuenzanisa mashandiro akasiyana emapeji ewebhu achishandisa muyedzo muenzaniso wevashanyi vako, tsanangura kuti muzanai yevashanyi vako inosanganisirwa mukuyedza, sarudza chinangwa chaungade kuyedza uye, pakupedzisira, iwe uchawanawo inogadziridza neemail nezve maitiro ako ekuyedza. Heino vhidhiyo pfupiso yeGoogle Maedzo: Seyakaomesesa uye akawedzera seGoogle Analytics yave,
Kuedzwa kwenzvimbo kunotungamira kuMufaro Wekutendeuka
Chitatu, Ndira 4, 2012 Chipiri, January 3, 2012 Douglas Karr
Kunze kwekuyedza kutsvaga, kumhanya uye nemagariro, pane zvakakosha zvikamu zveyero saiti iyo kambani yako inofanira kunge ichishanda kuti iongorore kuti vashanyi vanoshandurwa sei kuva vatengi. Zvinhu zviri mukati uye pamapeji akafanana kufona-kune-chiito mabhatani, marongero, kufamba, kuteedzera, kukwidziridzwa, kupihwa, Checkout maitiro, chigadzirwa sarudzo maitiro uye kunyangwe chengetedzo inofanirwa kugara ichiedzwa kuti uwane nyaya uye kugadzirisa mashandiro eako peji rekumhara kana ecommerce peji . Makambani ari kufara nawo
Wednesday, January 4, 2012 Tuesday, January 3, 2012
Yahoo! Tsvaga Kushambadzira… Wakandirasa!
Chipiri, Mbudzi 27, 2007 Chipiri, Mbudzi 27, 2007 Douglas Karr
Direct Mail inzira inodhura. Nekuti inodhura, haigone kuitwa zvisirizvo. Ini ndaiwanzo kuudza vatengi vangu kuti mukana wekuwana kutarisisa kwemumwe munhu neDirect Mail yaive yakanangana nehurefu pakati pebhokisi ravo retsamba nemarara avo. Chikamu chega chemushandirapamwe wekutumira tsamba wakakosha kupfuura chakanangwa uye chidimbu kugona kuita pamushandirapamwe. Nhasi, ndakagamuchira yakasikwa zvakanaka